फिल्मको निर्माण जुँवा जस्तै, एकपटक डुब्दा फेरि आउने आशा – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentफिल्मको निर्माण जुँवा जस्तै, एकपटक डुब्दा फेरि आउने आशा
फिल्मको निर्माण जुँवा जस्तै, एकपटक डुब्दा फेरि आउने आशा
November 21, 2018 Tulasa Karki Entertainment, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
जब मानिस जुँवा खेल्न बस्छ, केही पैसा गुमाउँछ या कमाउँछ । पैसा गुमाउँदा फेरि कमाउने आशा हुन्छ र उसले पैसा थप्दै जान्छ । पैसा कमाउँदा अझै कमाउने आशा हुन्छ र झनै खेल्न थाल्छ । यो लोभमा उसले अझै धेरै गुमाएको पत्तो नै पाउँदैन ।
नेपाली सिनेमाको निर्माण पनि जुँवा जस्तै भएको छ । सिनेमाको लगानी बालुवामा पानी भन्ने उखान त पुरानो भयो । सिनेमामा लगानी मुर्गाको खानी भन्दा के होला अब ? किनकी, अहिले त सिनेमाको लगानी हेर्दा मुर्गाको नै बर्चस्व छ ।
तर, सिनेमा निर्माणमा लागिसकेपछि करोडौ डुबेपनि निर्माताले अर्को बनाउन छाड्दैनन् । सिनेमा सुश्री बनाएर डुबेकी आशिका तामाङ अर्को सिनेमा बनाउन कस्सिएकी छिन् । सुश्रीमा १ करोड भन्दा धेरै डुबाएको उनको अनुभव छ । तर, पनि उनी अर्को सिनेमा बनाएर पैसा कमाउने धुनमा छिन् र अर्को सिनेमा बनाउन लागेकी छिन् ।
सिनेमाको लगानी जुँवा हो भन्ने उदाहरण निर्माता हसनराजा खानलाई हेर्दा पनि हुन्छ । उनले बनाएको पहिलो सिनेमा अलबिदा डुबेको थियो । कतारमा बसेर कमाएको रकमले अलबिदा बनाएका उनी डुबे । त्यसपछि फेरि कतारमै गएर रकम कमाएर उनले रोमियो बनाए । रोमियो पनि डुब्यो । रोमियो डुबेपछि अहिले उनी दुबइ पुगेका छन् । उनले केही बर्षमा फेरि अर्को सिनेमा बनाउने जमर्को गर्ने पक्का नै हो ।
निर्माता एम के पौडेलको अवस्था पनि उही नै हो । नाइन ओ क्लकदेखि राज्जा रानी, रुद्रप्रियामा त उनले देखिने गरि नै लगानी गरेका छन् । उनले नदेखिने गरी लगानी गरेका सिनेमा अन्य आधा दर्जन छन् । तर, सबै फिल्मबाट उनी डुबे नै । तर, जती डुबेपनि उनलाई कमाउने आशा मरेको छैन । उनी अब एकसाथ ३ वटा सिनेमा बनाउन लागिपरेका छन् । राज्जा रानी २ बनाउने तयारी त उनले थालिसकेका छन् ।
नेपाली सिनेमा बनाएर नडुब्ने निर्माताको संख्या बर्षमा ५ होला । आधा प्रतिशत निर्माता त सिनेमामा लगानी गरेर कती कमाइन्छ भन्ने नवुझेर नै आउँछन् । सिनेमा निर्माण अगावै करोडौ खर्च गर्न तयार हुने निर्माता सिनेमा रिलिजसम्म थन्किन्छन् र पुर्पुरोमा हात राख्छन् । तर, छक्का पन्जा, रामकहानी, नाई नभन्नु ल ५ लगायतका सिनेमाले देश र विदेशमा कमाएको देखेका निर्माता पैसा आकाशबाट यसै झर्छ भन्ने सोचेर लगानी गर्छन् ।
एउटा सिनेमाबाट मुर्गा भएपछि फेरि त्यसलाई उठाउन लोभमा करोड स्वाहा बनाउने निर्माताको संख्या त यहाँ ९० प्रतिशत छ । बाठा निर्माताले पैसा उठाएका छन् । अरु बाँकी त एउटाले डुबाए अर्कोले उठाउलानी भन्ने आशामा हिड्दा हिड्दै रोडपति बन्ने गरेका छन् । तर, पनि सिनेमा निर्माणमा आउने यस्ता मुर्गा निर्माताको कमी छैन । सिनेमा बनाउनका लागि निर्माता फकाउने पनि उस्तै, फकिने निर्माता पनि उस्तै । के सधै यसरी नै चल्ने हो त सिनेमा क्षेत्र ?
नाम चलेका निर्देशकको गुम्दो ब्रान्ड
अमिताभ बच्चनलाई तृतीय सयाजी रत्न पुरस्कार